सर्वोच्चमा पहिलोपटक गोला प्रक्रियाबाट पेसी, कसरी तोकिन्छ पेसी ? « GDP Nepal
सर्वोच्चमा पहिलोपटक गोला प्रक्रियाबाट पेसी, कसरी तोकिन्छ पेसी ?
श्रीलङ्का, युरोपेली मुलुकहरुमा अटोमेसन ९स्वचालित० प्रणालीको प्रयोग भएको छ । नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनमा अटोमेसनकै कुरा छ । अटोमेसन लागू नभएसम्मका लागि गोलाप्रक्रियबाट पेसीको व्यवस्थापन र सुनुवाइ गरिएको हो ।
स्वच्छ सुनुवाइको राम्रो अभ्यास हो : वरिष्ठ अधिवक्ता डा ज्ञवाली